Maraykanka oo cunoqabateyn kusoo rogay dacwad oogayaasha maxkamadda ICC | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maraykanka oo cunoqabateyn kusoo rogay dacwad oogayaasha maxkamadda ICC
Maraykanka oo cunoqabateyn kusoo rogay dacwad oogayaasha maxkamadda ICC
Maamulka Madaxweyne Trump ayaa Arbacadii cunoqabateyn kusoo rogay dacwad oogaha ugu sarreeya maxkamadda dambiya dagaalka Fatou Bensouda iyo saraakiil sarsare ka gadaal markii ay ku adkeysteen sii wadida baaritaanka dambiyo dagaal oo ay galeen dad Maraykanka u dhashay.
Xoghayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa ku dhawaaqay tallaabada Maraykanku ka qaaday maxkamadda fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Nederland. Maraykanka ayaa uga gol leh tallaabadaan si ay u joojiyaan baaritaanka dambiyada Maraykanka iyo xulafadiisa.
Cunoqabateynta ayaa waxaa ka mid ah xayiraadda hantida Maraykanka ka taalla Fatou Bensouda iyo madaxa ikhtisaaska ama go’aamiya in maxkamaddu awood u leedahay galidda dacwada Phakiso Mochochoko . Waxa kale oo ay xayiraaddu saameyn doontaa hantida taalla meel ka baxsan Maraykanka ee sharciga Maraykanku qabanayo.
Mike Pompeo xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegay in maxkamadda oo aysan Maraykanku qayb ka ahayn ay tahay hey’ad musuq harreeyay oo dunsan.
Pompeo ayaa si carro leh u yiri uma dulqaadan doonno isku daygooda sharcidarrada ah ee ay ku doonayaan in dad American ah la maxkamadeyo.
Waxaa si la mid ah dacwad oogayaasha ICC wajahaya ciqaab dad u dhashay Maraykanka oo taageero siiyay dacwad oogayaasha sida uu sheegay Mike Pompe
Maraykanka ayaa horay xayiraad dhanka safarka ah ugu soo rogay Fatou Bensouda iyo saraakiil kale oo ka tirsan ICC kaddib markii maxkamaddu sheegtay inay bilaabayaan baaritaan la xiriira jirdil iyo tacadiyo ay Maraykanku ka geysteen Afghanistaan.
Maxkamadda dambiyada dagaalka ayaysan Maraykanku qayb ka ahayn waxayna marar badan Maraykanku hor istaageen in la baaro ciidankooda iyo dalalka xulafada la ah sida Isra’iil.
Previous articleQadar oo 65 Milyan oo Dollar ku bixisay geynta ciidanka Turkiga ee dalkeeda
Next articleMaraykanka oo muranka Wabiga Niil dartii u hakiyay kaalmadii Itoobiya